Sidee lagu cayilaa? - iftineducation.com
Sidee lagu cayilaa?
iftineducation.com – iftineducation.com – Waxay badanaa dadku aminsanyihiin ama yiraahdaan Qofkan caatada wuu u dhashay. Ama jirkiisa iyaa dhaqso cuntada u guba (fast metabolism).
1m80/5’11″ ugu yaraantii 80kg/176lbs
caatada maxaa keena?
naagta aduunka ugu siilka weyn oo noqotay